i-light light Factory | I-china Abenzi bokukhanya abahlanzekile, abahlinzeki
i-aluminium ingxubevange yokudonsa izinyembezi ekukhanyeni kwezokwelapha, ukudla, inhlanzeko, ugesi, igumbi elihlanzekile
Umthunzi okhanyayo waklanywa ngohlobo lwe-teardrop. Isibani sixhunywe kujantshi noma sifakwe ngokuhlukile, ngentambo yokuxhuma esheshayo ngaphakathi. Umzimba wesibani nojantshi wenziwe ngezingxenye zensimbi futhi kukhiywe ngezikulufo zensimbi engagqwali ukuqinisekisa ukuthi umzimba wesibani nojantshi akuwi. Kusebenza kwezokwelapha, ezempilo, ukudla, i-elekthronikhi namanye amazinga aphezulu wokukhanya kokuhlanzwa.
ikilasi 1 lift emuva noma uhlobo oluphansi oluvulekile ilambu elihlanzekile
Ukukhanya kufanelana ngokuphelele ne-keel, futhi kulula ukuyifaka. Umzimba okhanyayo nesembozo sangemuva sigcwele ukubekwa uphawu kokuqina okukhulu. Alukho uthuli, okulula ukuluhlanza, akukho ukukhanya, ikhava yangemuva isebenzisa uhlobo oluvulekile lomnyango, olulungiswe ngebhakede lekhwalithi ephezulu, okulula ukulivula nokuluvala, kulula ukulunakekela, iphutha losayizi jikelele lingaphansi kuka- +/- 1mm, ubucayi buhambisana ne-JS141.
Umzimba okhanyayo uklanyelwe ngomphetho we-beveled wokuhlanza okulula nokubukeka okulula. Inama-mirror reflector. Umthunzi okhanyayo uxhunywe nomzimba okhanyayo nohambo lokufaka uphawu lwekhwalithi ephezulu. Ifanele ukukhanyisa i-workshop kagesi, iworkshop yezemithi kanye neworkshop ehlanzekile esezingeni eliphakeme.
ikilasi 1 uhlobo oluhlehlisiwe ukukhanya okuhlanzekile
ukukhanya okuhlanzekile kwezokwelapha kwegumbi lokusebenza kwezokwelapha i-ICU
Ikhadi lokuklama lomzimba elikhanyayo eliphuzi, ukubukeka okunomusa, isibuko esakhelwe ngaphakathi, ukukhanya kohlaka lwe-luminaire 45 degree slope, enhle, okulula ukuyihlanza; Ukuxhumana phakathi komthunzi wesibani nomzimba wesibani usebenzisa umugqa wokubeka uphawu osezingeni eliphakeme; Usayizi wesibani ungenziwa ngezifiso. Izibani ezihlanzekile ezingashintshi, ezifanele igumbi lokuhlinza lezokwelapha, isigceme se-ICU, njll.
insimbi engagqwali ebandayo ebunjiwe iphaneli lesigaba 1 ukukhanya okuhlanzekile
ukukhanya kwe-germicidal akudingeki kuguqulwe kube ukukhanya okubonakalayo, ubude be-253.7 nm bungaba nomphumela omuhle kakhulu wokuvala inzalo, lokhu kungenxa yokuthi amaseli emigqa yokufakwa kokukhanya kunomthetho, ku-250-270 nm ray ye-ultraviolet ine-absorption enkulu kunazo zonke, umunce imisebe ye-ultraviolet empeleni engxenyeni yezakhi zofuzo zeselula noma i-DNA, idlala amandla e-allochromatic, ama-ultraviolet photons amuncwa ngamabhangqa ayisisekelo e-DNA, abangela ukuguquka kwezakhi zofuzo, enze amabhaktheriya afe ngaso leso sikhathi noma engakwazi ukuzala kabusha, afeze injongo yokuvala inzalo.